Umaki: Ukuqondiswa Kwesimo Sezulu | Martech Zone
Umaki: Ukubhekiswa Kwesimo Sezulu
Dala i-Ultimate Experience yekhasimende
NgeSonto, Septhemba 9, 2012 NgeSonto, Septhemba 9, 2012 Douglas Karr
Ngenkathi i-Intanethi iqhubeka nokuvela futhi isivele ikhona emashumini ambalwa eminyaka, umhlaba unolwazi kakhulu lokuthi ungakha kanjani isipiliyoni esihle samakhasimende. Ukufana phakathi kwendlela ophatha ngayo amakhasimende mathupha kanye nendlela owaphatha ngayo ku-inthanethi kuyefana lapho uzama ukudala umuzwa wokugcina wamakhasimende. I-Infographic yi-Monetate: Abathengi balindele ukusebenzisana kwe-inthanethi okuphathelene kakhulu nemikhiqizo. Kumabhizinisi amaningi, amandla wokuletha i-
Khulisa imiphumela yakho ye-imeyili ngokuziphendulela nangendlela efanele nge-MarketingSherpa's 2009 Marketing Marketing Bechmark Guide. Amabhizinisi afuna izindlela ezonga izindleko zokukhulisa umthelela nokwakha ubudlelwano kulokho okungenzeka kube nzima emnothweni womhlaba. Futhi i-imeyili iyaqhubeka ingenye yezindlela ezisetshenziswa kakhulu nezisetshenziswa kabi lapho abathengisi baphendukela khona ukuze baxhumane namakhasimende abo. Kepha ukuphela kwendlela yokwandisa ukusebenza kwakho kwe-imeyili ukumaketha ngokuziphendulela nangempumelelo.